Famantarana ireo mpitsidika an'i B2B ao amin'ny WordPress Blog | Martech Zone
Sabotsy, Desambra 11, 2010 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Roa herinandro lasa izay, ireo olona mahafinaritra ao Visual Blaze nanome ahy fampisehoana vokatra vaovao naorin'izy ireo NameTag. Mahafinaritra ilay fitaovana, manome antsipiriany lalina momba ireo orinasa mitsidika ny tranokalanao sy manome ireo pejy efa hitany, ny fomba nanondroana azy ireo, ary koa ireo teny lakile mety notadiavin'izy ireo rehefa tonga tao amin'ny tranokalanao.
Avy hatrany dia nanontany an'i John Nichols aho raha afaka miara-miasa amin'izy ireo izahay ary mamorona NameTag WordPress Plugin ary nanaiky izy, nanaiky! Nahavita ny tsimbadika voalohany an'ny plugin izahay androany ary nanoratra azy io niaraka tamin'ny WordPress repository androany maraina. Amin'ny fampiasana ny API misy azy ireo, ny plugin dia ahafahanao mijery ireo mpitsidika 25 farany indrindra amin'ny tranokalanao mivantana avy amin'ny dashboard ao anatin'ny bilaoginao WordPress!
Ny plugin dia tsy fanoloana ny toolet izay atolotry VBTools ao anatiny Interface interface ApplicationTag. Ao anatin'ny fampiharana NameTag, azonao atao ny manontany ny elanelam-potoana misy anao ary mamoaka ny rakitra amin'ny filetypes maromaro. Ny plugin dia ampiasaina fotsiny hanampiana ny kaody fanarahan-dia amin'ny WordPress ary koa hanome dashboard azonao jerena indray mandeha rehefa manavao ny tranokalanao ianao.
The NameTag Ny serivisy dia mora vidy ihany koa - latsaky ny $ 30 isam-bolana. Izany dia vidin'ny vidin'ny fitaovana fividianana fitarihana B2B ilaina toy izany. Miarahaba an'i John noho ny vokatra tsara sy ny vidiny lafo. Ankasitrahanay koa ny fotoana ahafahana mampivelatra ny fampidirana ny vokatrao amin'ny WordPress! Mazava ho azy, nampidirinay tao amin'ny plugin izay nozaraina maimaimpoana ary koa ao anatin'ity lahatsoratra bilaogy ity ny rohy ifandraisanay.
Raha hametraka ny plugin, tadiavo fotsiny ny "NameTag" ao anatin'ny pejy plugins WordPress anao, ampio ary apetaho. Hanome anao rohy ny plugin avy eo hanoratana ny serivisy sy hidiranao amin'ny mombamomba anao. Mihaza sambatra!